Safiirka Talyaaniga oo la kulmay gudoomiyaha barlamaanka Shariif Xasan
Buluugleey Jun 9, 2005
Safiirka dowladda Talyaaniga u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Signor Mario Vitelli ayaa la kulmay guddoomiyaha baarlamaanka dowlada KMG Mudane Sharif Xasan iyo mudanayaashaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Kulankaas oo ka dhacay hoteel Saxafi oo ah halka xubnaha dowladda intooda badan ay degen yihiin ayaa looga hadlay siidii loo hagaajin lahaa xiriirka Talayaaniga uu la leeyahay dowlada KMG Soomaaliya oo beryahan danbe murugsanaa.
Mudane Mario Vitelli waxaa uu sheegay in xukuumaddiisu door weyn ka qaadan doonto nabadeynta iyo iney dadaal weyn ka muujin doonto sidii Soomaaliya ay gacan u siin lahayd. Mudane Mario Vitelli oo sheegay in dowlada Talyaaniga ay dadaal farabadan ku bixineyso sidii loo soo afjari lahaa khilaafaadka u dhaxeeya madaxda dowlada KMG ah.
Shirkaan wuxuu ka danbeeyey markii shacabka Soomaaliyeed ee degen Muqdisho ay qaban qaabinayeen banaanbax looga soo horjeesanayo dowlada Talyaaniga markii mudanayaasha labada gole ee ku sugan Muqdisho ay ku dhaleeceeyeen in taliska ra'isul wasaare Selvio Berlusconi muujiyay inuusan dhexdhexaad ka ahayn oo uu dhan ka mid ah xigsaday xubnaha dowladda federalka ee aragtida siyaasadeed ku kala guuray.